Puntland oo Isku Duuban: RW Kheyre Soodhawoow! (sawiro) – Radio Daljir
Luulyo 30, 2018 2:35 b 0
Shacabka Puntland iyo madaxdooda oo isku duuban ayaa shalay oo taariikhdu aheyd 29 Luulyo waxa ay si aan kalahar laheyn oo kal iyo laab ah Puntland ugu soodhaweeyeen RW Kheyre. Waa safarkii ugu horreeyey oo Kheyre ku yimaado Puntland tan iyo intii uu noqday Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya.
Kheyre ayaa la filayaa in uu Puntland sii joogi doono hal asbuuc, uuna dhagax dhigi doono mashaariic kala duwan, asaga oo isla markaasna la kulmi doono qaybaha bulshada reer Puntland oo ay ugu horreeyaan isimadda iyo hoggaanka dhaqanku.
Hoos ka daawo sawirada soodhaweynta RW Kheyre iyo waftigiisa.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 479 Wararka 20832